Daozy 163 000 ihany no lany amin’ny 250 000 : nampisavorovo ny maro ny fanaovam-baksiny | NewsMada
Nisavorovoro ny maro, omaly momba ny fanaovam-baksiny. Teo aloha ireo tratran’ny omeko tsy omeko. Fa eo koa ireo velon’ahiahy amin’ny tsy mampanan-kery izany fanefitra izany raha ho any amin’ireo firenena Eoropeanina. Vaky vava hatramin’ny minisitry ny Fahasalamana. Etsy an-daniny, ny antsasaky ny fatra nohafarana ihany no lany amin’ity fanefitry ny covid-19 ity.
Niteraka fahasorenana ho an’ny olona efa tonga nilahatra vao maraina teny amin’ny vaccinodrome HJRA ny filazana fa tsy misy fanaovam-baksiny indray, omaly, noho ny baiko avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana. Nisy ireo efa teny an-toerana tamin’ny 5 ora sy sasany fa mbola maika hamonjy asa rehefa avy eo. Tamin’ny 8 ora sy sasany maraina vao nampahafantarina ireo mpilahatra fa tsy afaka handray azy ireo ny mpanao vaksiny ary tsy fantatra ny antony. Ho an’ny toeram-panaovam-baksiny sehatra Maitso Analamahitsy, nandeha nody maina fotsiny koa ireo efa nizarana laharana, ny alarobia lasa teo ary tokony hisitraka ny vaksiny, omaly. Tsy voaray intsony noho ny hamaroan’ny olona tonga nilahatra. Nanao peta-drindrina ny tomponandraikitra fa miato manomboka amin’ny 7 ora sy sasany maraina ny fanaovam-baksiny noho ny baiko avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika sy ny minisiteran’ny Fahasalamana. Voantso eny amin’ny HJRA avokoa ny mpiasa tao. Noesorina ny tranolay fandraisana ary tsy nisy fanaovam-baksiny. Nanambara anefa ny minisitry ny Fahasalamana, fa naato ny vaksiny noho ny fandaminana sy ny fivorian’ny tomponandraikitra rehetra ary tokony niverina ny tapakandro hariva ny fanaovam-baksiny manerana ny Nosy. Niverina nandray ny olona vonona hisitraka ny vaksiny covishield indray ny tetsy amin’ny HJRA, hany sisa niasa ny tapakandro hariva ho an’ny eto Antananarivo.
Miandry fanazavana avy amin’ny OMS
Ankoatra izany, nahagaga ny minisitry ny Fahasalamana, ny Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis ny fanambaran’ny masoivoho frantsay, afakomaly, nilaza fa tsy nahazo ny fankatoavan’ny tomponandraikitra ara-pahasalaman’ny Vondrona eoropeanina (UE) ny vaksiny covishield nampiasaina teto Madagasikara. “Gaga izahay satria niara-nitsena ny fahatongavan’ny vaksiny covishield teny Ivato ny solontenan’ny UE miasa eto amintsika. Ny solontenan’ny Firenena mikambana niaraka amin’ny solontenan’ny OMS ”, hoy izy. Nohamafisiny aza fa anisan’ny nahazoana ny vaksiny ny fandaharanasa iraisam-pirenena Covax nokarakarain’ny OMS ary nozaraina ho an’ny firenena afrikanina. “Misy ve izany vaksiny natokana ho an’i Afrika ary manana ny azy manokana koa ny Eoropeanina?”, hoy ny fanontaniany. Andrasana ny ho fanazavan’ny OMS manoloana io fanambarana io.
Sahiran-tsaina ireo ho any ampitan-dranomasina
Velon’ahiahy koa ny maro manoloana ny fanambaran’ny masoivoho frantsay, ny amin’ny tena fahombiazan’ny vaksiny ho an’ireo efa nisitraka izany. Sahiran-tsaina ireo hivoaka any ivelany satria voalaza ho tsy manan-kery indray ilay karatra manamarina fa vita vaksiny covishield teto. Antony nandrisika nandray ny fatra voalohany izany.
163 000 ny fatra vaksiny nampiasaina
Fatra 163 000 tamin’ny 250 000 ihany no lany sy nampiasaina. Manome ny taha 65% izany. Efa mikarakara ny fahazoana ny fatra faharoa tokony ho roa volana aorian’ny fatra voalohany ny fanjakana izao. Mitohy koa ny fanadihadian’ny sampandraharaha “Pharmaco-vigilance” momba ny tranga tsy niriana miseho aorian’ny fandraisana ny vaksiny.